Football Khabar » ‘बार्सिलोना छाड्ने घोषणा’ कहिले गर्दैछन् भाल्भर्डे ?
‘बार्सिलोना छाड्ने घोषणा’ कहिले गर्दैछन् भाल्भर्डे ?
जतिबेला बार्सिलोना युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलबाट आउट भयो, त्यत्तिबेलै बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले राजीनामा दिने अनुमान गरिएको थियो । तर, उनले तत्कालै त्यस्तो निर्णय लिएनन् । बरु, उनले आफूले अर्को सिजन पनि टिम सम्हाल्ने बताए ।
त्यसपछि गत राति बार्सिलोना कोपा डेल रे फुटबलको उपाधि भिडन्तमा पनि पराजित भयो । उपाधि भिडन्तमा भ्यालेन्सियाले बार्सिलोनालाई २–१ ले स्तब्ध बनाउँदै उपाधि जित्यो । र, बार्सिलोना मात्रै ला लिगामा सीमित भयो ।
सो खेलपछि प्रशिक्षक भाल्भर्डेले तत्कालै क्लब छाड्ने घोषणा गर्ने धेरैको अड्कल भए पनि फेरि पनि उनले त्यसो गरेनन् । यो समाचार बनाउँदासम्म पनि भाल्भर्डे बार्सिलोनाका प्रशिक्षक यथावत छन् । र, उनले तत्कालै क्लब छाड्ने संकेत देखिएको छैन ।
बार्सिलोनमा दोस्रो सिजन बिताइरहेका भाल्डर्भेले गत सिजन ला लिगा र कोपा मात्रै जितेको थियो । यसपटक ट्रिबेल जित्ने दौडमा रहेको बासिलोना अन्ततः ला लिगा मात्रै सीमित भयो । धेरैले भाल्भर्डेका लागि यो उपलब्धि खराब रहेको विश्लेषण गर्दै उनले क्लब छाड्ने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् ।
तर, भाल्भर्डे स्वयंले भने तत्कालै क्लब नछाडी फेरि पनि जागिरलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । गत राति खेलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भ्यालेन्सियासँगको हार कठिन भए पनि आफूले क्लब छाड्नेबारे नसोचको बताए ।
‘उनीहरूले हामीलाई हराए । हामीले न राम्ररी गोल गर्न सक्यौं, न उनीहरूलाई रोक्न सक्यौं,’ भाल्भर्डेले भने, ‘यो खेलबारे मलाई अरू केही भन्नु छैन ।’
भाल्भर्डेले बार्सिलोनामा आफ्नो भविष्य के हुने भन्नेबारे पनि बताए । ‘के अब तपाईं क्लब छाड्दै हुनुहुन्छ’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘यी करणले मैले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म अर्को सिजन टोली सम्हाल्नेछु । बाँकी क्लबको निर्णय हो ।’
भाल्भर्डेले भ्यालेन्सियाविरुद्ध आफ्ना खेलाडीले उत्कृष्ट खेल्न नसकेको बताए । ‘हामीले रक्षापंक्तिको कमजोरीले चाँडै २ गोल खायौं । २ गोल पछि खेलमा नियन्त्रण गुम्यो,’ उनले भने, ‘आक्रमण लाइन योजनाअनुसार नचल्दा पनि आवश्यक गोल भएन ।’
च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे हारिकन पनि यो सिजन राम्रो रहेको उनले बताए । ‘हामीले च्याम्पियन्स लिग र कोपा गुमायौं । तर, हामीसँग ला लिगाको उपाधि छ । हामी यसमै खुसीयालाी मनाउँछौं,’ भाल्भर्डेले भने ।
प्रकाशित मिति १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०६:०२